နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Google Latitude (New!!!)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:55 PM
khin oo may February 4, 2009 at 11:52 PM
khin oo may February 4, 2009 at 11:56 PM
you tube မှာလဲ ကိုဘ မပြောခင်ကတည်းကသွားကြည့်ပြီးသွားပြီ.
Ko Boyz February 5, 2009 at 12:01 AM
khin oo may February 5, 2009 at 12:30 AM
khin oo may February 5, 2009 at 12:44 AM
khin oo may February 5, 2009 at 1:19 AM
google မြေပုံကိုသုံးဘူးပါတယ်။ အခု(ဂျီမေးလ်လစ်ထဲက ဘော်ဘော်တွေ နေတဲ့ နေရာကို ပြတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲဗျ...။) ကိုလဲ တွေ့ပါပြီ. အသုံးပြူကြည့်ပါတယ်။ မြင်ရပါတယ်။
Singapore လို့မရိုက်ဘဲ Yangon လို့ရိုက်လိုက်တာလဲ ရန်ကုန်မှာ ကိုယ့်နာမည်ပေါ်တဲ့အကြောင်းပြောတာပါ။ စမ်းကြည့်ပါလာ။။ ဒီထက်တော့လဲ မရှင်ြး့ပတတ်တော့ဘူး။
khin oo may February 5, 2009 at 1:20 AM
ဒီလောက်ဘဲ ..ကျန်တာတော့ N2 နဲ့ဘဲဆွေးနွေးတော့.။
Ko Boyz February 5, 2009 at 1:26 AM
I'v got yr acceptance mail. But I didn't see u on map. r u hiding yr location ??
khin oo may February 5, 2009 at 1:45 AM
ကိုဘွိုက်စ်လဲ hide ထားတာဘဲ။
Ko Boyz February 5, 2009 at 1:55 AM
ကျွန်တော် မဟိုက်ပါ။ ဖုန်းက Your location is currently not available ဆိုပြီး ကျွန်တော့်နေရာကို ပြမထားလို့ပါ။ ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားပေမယ့် မပေါ်ပါ။
“ကိုဘွိုက်စ်လဲ hide ထားတာဘဲ။” ဆိုတော့ အန်တီဂွိက ပုန်းထားတာကိုး...။
:P February 5, 2009 at 8:21 AM
ကောမန့် 10 ခုရနေလို့ ဖတ်ကြည့်တော့ မိတ်ဆွေ ၂ ယောက် စကားစမြည်ပြောနေကြသကိုး....။
ဖတ်ပြီးပါပြီ.. ခိုင်းတာတွေ လုပ်မကြည့်ရသေးပါ....
သက်ဝေ February 5, 2009 at 8:46 AM
သက်ဝေ February 5, 2009 at 8:48 AM
နည်းပညာတွေက ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် တိုးတက်လာတာပဲနော်...
တို့ကတော့ ဘာမှမတတ်၊ ဘာမှ နားမလည်လို့ ဘာမှကို ရှာမကြည့်ဘူး...
Latest Information အတွက်တော့ ကျေးဇူးပါ ကိုဘွိုင်းဇ်ရေ...
MrDBA February 5, 2009 at 10:55 AM
ကိုဘွိုက် အဲသဟာက ဗေ့စ်ကောင်းမှစမ်းနိုင်တာဗျ ..ဆိုတော့ကာ Why don't we test together? ဗမာလို သူများတွေနားလည်အောင် ပြောရရင်တော့ဗျာ .. ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အတူတူမစမ်းကြသလဲပေါ့။ အတူတူစမ်းကြရအောင်လားပေါ့။ (ဟမ် ..အဲသဟာလိုဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေစမ်းကုန်ကြပြီလဲဆိုပြီး သို့လော သို့လောတွေ တွေးကုန်မှဖြင့် ..တိန်!)
Ko Boyz February 5, 2009 at 11:08 AM
ကိုဒီဘီအေ ဗေ့စ်ဆိုတာ ဘာပါလိမ့်ဗျာ...။
Base ကို ပြောချင်တာလား...
ကျွန်တော့် အီးမေးလ်လိပ်စာကို အဒ်လိုက်ပါ။ စမ်းရအောင်။
စလုံးကတော့ ၂၇ နိုင်ငံထဲတော့ မပါသေးဘူးဗျ...။
MrDBA February 5, 2009 at 11:19 AM
နို့ .. အီးမေးလိပ်စာမှ အသိဘဲဟာကို။ ပရိုဖိုင်မှာ သွားရှာတာလဲမတွေ့။
Ko Boyz February 5, 2009 at 11:25 AM
ထုံအဖွဲ့ထဲတော့ ပါချင်နေပြီနဲ့တူတယ်...။ ထည့်ထားပေးပါဒယ်...။ ရအောင် ရှာပါလေ...။ ဟိ
ksanchaung February 5, 2009 at 3:54 PM
“ဘေ့စ်”များရင် မကောင်းဘူး။ “အက်ဆစ်”များရင် ရှော့ရှိတယ်။ အကောင်းဆုံးက “ပီအိပ်ခ်ျဆဲဗင်း”ပဲ။
MrDBA February 5, 2009 at 4:06 PM
ထုံထဲအထည့်ခံရတော့မှာလား မသိ ခုထိကို မတွေ့တာ။ :(
khin oo may February 6, 2009 at 6:25 AM
ကြိုးစားပါ.ကြိုးစားကြပါ။ ပီအိပ်ခ်ျ. eight ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပါ။
khin oo may February 6, 2009 at 6:26 AM
khin oo may February 6, 2009 at 6:34 AM